Bilaogi-Mozika 5 Miresaka Momba ny Sehatry Ny Hira “Underground” Ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2014 4:32 GMT
Na dia henjana aza ny sivana ao Shina, fa misy ny tarika mpihira Shinoa miasa amin'ny fantsom-baovao tsy voaramason'ny governemanta, miezaka ny hanangana feo mahaleotena amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra an-kira ao Shina.
Tsongainay ny bilaogin-kira dimy tampony indrindra hampafantatra anao bebe kokoa ny sehatry ny mozika ambanilalana ao Shina.
Kirakirain'ny orinasa miorina ao Beijing sy Shanghai Split Works, ny China Music Radar dia bilaogy mireaka ny sehatry ny mozika sy ny malaza any Shina, ahitana mpihira mahaleotena ka hatramin'ny artista malaza. Loharanom-baovao anarahana ny vaovao farany sy ny fanampim-baovao momba ny indostrian'ny mozika any Shina koa izy io. Niteny ny Radar tamin'ny faran'ny taona 2013:
Tamin'ny 2013, feno dia feno (fampisehoana fa tsy mpijery) ny toerana, avy amin'ny kianjabem-pampisehoana no mitsontsorika mankany amin'ny efitra fisotroana kelikely kokoa (fa mbola ngezabe ihany). Mbola misy manerana ny firenena ny fetibe ntaolo sy vaovao, raha efa lasa mpifaninana mety azo iainana ihany koa ny Baidu, ny Tencent ary ny Xiami tompon'ny Alibaba amin'izao fotoana izao.
Midika ara-bakinteny hoe “anila”, ny Pangbianr dia lampihazo mivoaka amin'ny tenim-pirenena roa mitrandraka ny kolontsain'ny fanaovana mozika ao Shina ary mametraka ho iraka ny fampiroboroboana ny mozika ambanilalan'i Shina sy fananganana fifandraisana eo amin'ny mpihira sy ny artista anatiny sy ivelan'i Shina. Mampiditra mozika misongadina avy any Beijing sy ny faritra hafa ao Shina amin'ny alalan'ny haino sy jery henoina mivantana, tamberina sy tafatafa amin'ireo mpitendry mozika mahaleotena Shinoa.
Na dia hafa noho ny bilaogy hafa aza ny pangbianr dia manomana fampisehoana an-kira, fijerena horonantsarimihetsika ary adihevitra any amin'ny toeram-pihirana isan-karazany ary ny efitranon-javankanto manodidina an'i Beijing. Miasa miaraka amin'ny mpitendry mozika ihany koa izy amin'ny fizarana CDs, DVDs ary boky.
Beijingdaze dia loharanom-baovao lehibe hafa momba ny mozika ambanilalana any Shina ahitana tsikera fanampiny momba ny CD sy ny fanehoan-kevitra momba ny fampisehoana. Ny zavatra iray tena misongadina ao amin'ny bilaogy dia ny fandikan'ny bilaogera ny sasantsasany amin'ny tononkira amin'ny teny shinoa ho amin'ny teny anglisy.
MOGO dia sehatry ny mozika an-dahatsary mifantoka amin'ny tanora mpihira sy artista misongadina. Asongadiny ihany koa ny tafatafa an-dahatsary ifanaovany amin'ny mpitendry mozika sy artista mahaleotena.
Natsangana tamin'ny marsa 2009 ny Wu Jie izay tambajotran-kira noforonina avy ao Shina sy avy any ivelany.
Ny iraka ataony dia ny fampiroboroboana “ny feo tsy noraharahiana sy ireo artista tsy dia malaza sy fanta-bahoaka,” mizara ireo fanampim-baovao momba ny mozika, tsikera momba ny CD, videos, podcasts (fandraisam-peo) ary tafatafa nifanaovana tamin'ny mpitendry mozika mahaleotena. Fantsona tsara ho an'ny tanora Shinoa hampafantarana ny mpitendry mozika (mpihira) sy ny hira tandrefana ihany koa izy io.